La wareeg awooda lacagtaada hawlgabka - KPA Pension
La wareeg awooda lacagtaada hawlgabka
Ma noqon wayday wax ka badan intan?
In haweenku sida caadiga ah helaan lacag hawlgab oo ka sii liidata ta nimankooda maaha wax cusub oo la ogaaday. Dad badan ayaa doortay inay indhaha ka qarsadaan xaqiiqada maadaama fikrada mustaqbal faqiir ahi ka bajinayo.
Qaar kale waxay oggolaadaan heshiisyo lacagta hawlgabka oo ah qaali oo aan wanaagsanayn iyagoo aaminsan inay tani xallin doonto dhibaatooyinka oo dhan.
Laakiin in dhibaatooyinka ku horyaala dib loo dhigo maaha istaraatajiyad wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee waxa jira wax baddel u noqon kara. Annika Creutzer, khabiirada dhaqaalaha gaarka oo aad loo yaqaano, waxay ina baraysaa in lala wareego awooda xaaladan iyo lacagta hawlgabka. Iyadu waxay buugan ina dhexmarinaysaa tobanka dabinood ee ay tahay inaad ka fogaato – sida dabinka lammaanaha iyo dabinka shaqada nuska ah.
La wareeg awooda dhinaca lacagtaada hawlgabka. Weli maaha xilli dambe!